Jery todika -Taona 2015 : nidirana ny fanabeazana nomerika | NewsMada
Jery todika -Taona 2015 : nidirana ny fanabeazana nomerika
Nanamarika ny taona 2015 ho an’ny fanabeazam-pirenena ny fidirana ho an’ny fampianarana nomerika. Ankoatra ny fizarana « tablette » ho an’ny lycée 80, nametrahana fitaovana ahazoana herinaratra ny sekoly 15 miaraka amin’ny fitaovana informatika mahazo « connexion internet » avy hatrany. Hitondra fivoarana ho an’ny fampianarana ny zaza malaga sy ny hetsika izay hitohy amin’ny ivontoeram-pampianarana 1 000 amin’ity taona ity, araka ny nambaran’ny tomponandraikitra. Hetsika faharoa ny fandraisana ny mpampianatra 10 000 andiany faharoa. Efa nivoaka ny lisitra farany ary hiroso amin’ny fikarakarana ny fandraisana ny andiany fahatelo ny minisitera.
Ankoatra ny fikarakarana ny mpampianatra, niverina koa ny fizarana sakafo an-dakilasy ho an’ny taom-pianarana 2015-2016. Ho an’ny eto Antananarivo, EPP 93 ahitana mpianatra 56 000 no tohanana ara-tsakafo isan’andro. Tanjona ny tsy hanapahan’ny ankizy ny fampianarana ka fomba iray hahatongavana amin’izany ny sakafo. Vary sy laoka no omena ny mpianatra. Mandray anjara amin’ny fividianana ny arina fandrehitra sy ny fikarakarana kosa ny ray aman-dreny.
Nanjaka ny korontana teny amin’ny oniversite
Ho an’ny fampianarana ambony, nanjaka ny korontana sy ny herisetra nandritra ny taona. Nampiseho hery ny mpitandro filaminana ka nanohina ny karazan’olona maro hatramin’ny masoivoho amerikanina miasa eto amintsika mihitsy. Mbola tsy mifarana ny taom-pianarana ho an’ny fakiolte sasany raha efa manomboka ny azy kosa ny fakiolten’ny fianarana ho mpitsabo sy ny haisoratra sy ny siansa maha olona. Nifanesy ny fitakian’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpianatra satria nijanona efa ho roa volana latsaka ny fampianarana noho ny fitokonan’ny mpikambana amin’ny Seces. Niravona ihany ny disadisa momba ny resa-bola fa nisy fiantraikany amin’ny fizotry ny taom-pianarana. Nifarana tamin’iny taona iny koa ny fotoam-piasan’ny filohan’ny oniversite enina ka nisy ny fifidianana hametrahana ny mpitantana vaovao.